China Kisimusi Muti uye Wellheads fekitori uye vagadziri | Cepai
Muti weKisimusi wakajairika neWellheads zvinoenderana neAPI 6A 21th yazvino Edhisheni, uye shandisa zvinhu zvakanaka zveakasiyana mashandiro ezvinhu maererano neNACE MR0175 standard.
Wellhead uye muti weKisimusi neECPAI anoshandiswa pakuchera tsime uye oiri kana gasi kugadzirwa, jekiseni remvura uye kudonha kushanda. musoro weKisimusi nemuti weKisimusi wakaiswa pamusoro petsime kuti unyore nzvimbo yakavanzika pakati pekasi uye tubhu, inogona kudzora tsinga yemusoro uye kugadzirisa mwero wekuyerera uye kutakura oiri kubva kutsime kuenda kuipi pombi.
Isu tinogadzira musoro weKisimusi nemuti weKisimusi maererano neAPI 6A zviyero zvachose, zvakare zvinogona kupihwa kuti zvisangane nekirasi yezvinhu zvakakwana, tembiricha renji uye PSL & PR chikamu chinodiwa. Tine mhando zhinji yemusoro wemusoro wemusoro wesarudzo yeOEM, senge yakajairwa spool wellhead, ESP wellhead system, thermal wellhead, mvura jekiseni wellhead, nguva yekuchengetedza wellhead, huviri tubing wellhead, yakakosha wellhead.
Zita Krisimasi Muti & Wellheads
Muenzaniso Yakajairika Kisimusi Muti / Geothermal Wellheads / Multiple Wellheads nezvimwe
Dzvinyiriro 2000PSI ～ 20000PSI
Dhizaini, kugadzira, kuyedza uye zvinhu zvese zvinoteerwa neAPI 6A standard zvakanyanya
kunyanya yaisanganisira tubing musoro, vharuvhu yesuwo, vhunga vharuvhu, yepamusoro flange, muchinjikwa zvichingodaro
Main Structure yemhando yakakamurwa, yakasanganiswa mhando uye yakapetwa mhando mhando
Inogona kudzorwa kure neimwe nhamba yekuchengetedza mavharuvhu uye masystem ekudzora
Moto wakachengeteka uye kuputika-chiratidzo chebasa chiripo
Miti yeKisimusi yakachengeteka uye yakavimbika. Easy uye nyore mashandiro uye kugadzira
BASIC SINGLE KUSVIRA
Yakagadzirirwa kunyorera uko economics ndiyo mutyairi mukuru. Izvi zvinoitwa pasina kukanganisa hunhu kana chengetedzo.
◆ Inowanikwa inosvika zviuru zvishanu zvetsitsi uye masizi ekupedza kusvika uye kusanganisira 3 1/8 ".
◆ Inokodzera nharaunda inovava uye inoparadza.
◆ Inoshandisa Energy Systems 'yekudyidzana kupindirana elastomer zvisimbiso uye elastomer chisimbiso remubatanidzwa.
YAKADZIDZISWA SINGLE KUSVIRA
Yakagadzirirwa kunyorera uko mamiriro ekugadzira anozivikanwa kana kutarisirwa. Pfungwa iyi inosanganisira Energy Systems 'yezvivakwa elastomer zvisimbiso dhizaini uye yedu "mamiriro eunyanzvi" Model 120/130 mavhavha egedhi.
◆ Inowanikwa kusvika pamakumi mashanu ezviuru ematsime epsi uye hukuru hwekupedzisa kusvika pa4 1/16 ".
◆ Inokodzera mamiriro anovava, anokuvadza uye kana uchigadzira munzvimbo dzinotarisana nharaunda kana padyo padyo nenzvimbo dzinogarwa nevanhu (AA kusvika kuFF).
◆ Nharaunda dzekugadzira dzinosanganisira oiri, gasi, kusimudza gasi uye ese mafashama uye jekiseni mashandiro apo ngura inogona kunge iri nyaya.
◆ Inowanikwa kana kana isina kutonga-mutsara porting. Mazhinji mapoti anowanikwa kana zvichidikanwa.
Certified kuAPI 6A, Appendikisi F, PR-2 pamwe nekuwedzera kutenderera kutenderera sezvinodiwa neECPAI.
KUKOSHA KUSHANDA KUSVIRA KWEMAHARA
Yakagadzirirwa kune yakanyanya kuomarara gadziriso inodiwa. Inosanganisira Energy Systems 'patent simbi-kune-simbi tekinoroji tekinoroji uye zvachose isiri elastomeric Model 120/130 gedhi vharafu.
◆ Inowanikwa inosvika makumi maviri psi matsime uye ekupedzisa saizi inosvika uye inosanganisira 7 1/16 ".
◆ Inokodzera nharaunda inovava, inokanganisa uye kana uchigadzira munzvimbo dzinotarisana nharaunda kana padyo padyo nenzvimbo dzinogarwa nevanhu (AA kusvika HH).
◆ Nzvimbo dzekugadzira dzinosanganisira kunyanya kumanikidza uye kupisa-gasi kugadzirwa.
◆ Zvichienderana nechinhu, chiyero chekupisa pamusoro chinogona kunge chakakwirira se450 ° F.
◆ Inowanikwa uine kana isina kuenderera-yekudzora-mutsara porting. Mazhinji mapoti anowanikwa kana zvichidikanwa.
◆ Inoshandisa Energy Systems 'patent tekinoroji yesimbi-kune-simbi yekuvhara.
◆ Certified kuAPI 6A, Appendikisi F, PR-2 pamwe nekuwedzera mazana matatu seanodiwa neECPAI.
Yakagadzirirwa yese yakawanda tubing tambo yekupedzisa. Iyo inobatanidza block inogona kugadziridzwa painokodzera zvakanyanya kune iyo Saiti saiti saiti. Mavharuvhu anogona kunge ari kumberi akatarisana kana kuchinjanisa uko tambo refu inotarisana nedivi rimwe uye tambo ipfupi 180 ° kukanganisa.
◆ Inowanikwa inosvika zviuru gumi psi matsime uye ekupedzisa hukuru kusvika uye kusanganisira 4 1/16 ".
◆ Inokodzera nharaunda inotapira kana yakasviba, inoparadza.
◆ Nharaunda dzekugadzira dzinosanganisira oiri, gasi, kusimudza gasi uye ese mafashama uye jekiseni mashandiro.
◆ Energy Systems dhizaini yehurefu hwese kureba uye kuwana kwakawanda. Izvi zvinoshandura kuita mari yekuchengetedza uye yakachengeteka mashandiro ezvinhu evanogadzira vanogadzira.
◆ Inoshandisa Energy Systems 'kupindirana kwekambani uye zvisimbiso zveelastomer uye elastomer seal compound.Inowanikwa nekunamatira kwesimbi-kune-simbi kana zvichidikanwa.
Magetsi ANOGONESESA PUMP ZVINOGONESESA
Yakagadzirirwa ESP kana ESPCP kunyorera. Energy Systems yakagadzika pane sarudzo dzekupinda kuti izadzise zvese zvinodiwa neMushandi usingakanganwe kudiwa kwekuchengetedza nzira isingadhuri.
◆ Inowanikwa inosvika zviuru zvishanu zvematsime epsi uye hukuru hwekupedzisa kusvika uye kusanganisira 4 1/16 ".
Yakagadzirirwa Kirasi 1 Chikamu 1, isiri-Kirasi 1 Chikamu 1, kana yakapusa tambo packoff penetrator sarudzo.
Options Sarudzo dzekupinda dzakagadziriswa kuti dzigadzikane uye nyore kuiswa.
◆ Inokodzera nharaunda inotapira kana inovava uye ngura.
◆ Nzvimbo dzekugadzira dzinosanganisira oiri uye inoenderana nekuita jekiseni kana ngura ingave iri nyaya.
◆ Inoshandisa Energy Systems 'kupindirana kwekambani uye zvisimbiso zveelastomer uye elastomer seal compound.
TUBING-KUSVIRA KUZADZISA / FRAC KUyerera SYSTEM
Yakagadzirirwa zvekushandisa zvekusimudza zvekuumba zvePombi Mapombi uye Kufambira Mberi Mhashu Mapampu (PCP). Kuti ushandire zvirinani musika wekusimudza-wekusimudza, Energy Systems yawedzera Integral Production BOPs (IPBOP) kune yedu chigadzirwa portfolio. Iyo IPBOP inobvumidza iyo Operator kuti inyatso pinda zvakare mutsime rakachengetedzwa nekunamira pamatanda kana, kana tsvimbo dzakakamurwa, inobvumira munhu kupofumadza tsime.
◆ Inowanikwa inosvika zviuru zviviri psi matsime uye ekupedzisa hukuru kumusoro uye kusanganisira 4 1/16 ".
◆ Nharaunda yekugadzira ioiri asi inogona kuchinjika kuti ive inokodzera kana padyo jekiseni mashandiro akagadzira nzvimbo inoparadza.
◆ Kunyangwe zvakazvimiririra zvinokwanisa kupihwa, iyo Yakasarudzika Yekugadzira BOP (IPBOP) inogona kusanganisa tubing musoro bhoneti, kugadzirwa BOP uye kuyerera tee, kana chero mubatanidzwa weizvi, mune chimwe chinhu.
Integr Iyo Yakabatanidzwa BOP inopa mari yekuchengetedza kana ichienzaniswa nekutenga izvo zvinhu zvacho. Uye zvakare, nzira dzinogona kudonha dzakaderedzwa zvakanyanya, uye kureba kwese, uko kunogona kuve 50% kuderera, kwakachengeteka kune Vanogadzira Vanoshanda.
Ams Makondohwe eBOP anokwanisa kuvhara kubva ku0 kusvika 11/2 "tsvimbo.
YAKAKONZESWA TUBING KUSVIRA
Yakagadzirirwa kutendera vashandisi kuti vaenderere mberi nekugadzira kubva kune yakasikwa-simudza oiri uye gasi matsime pasina makuru ekugadzira. Energy Systems yakasangana nekushandisirwa kwakasiyana-siyana kwetubhi yakazvimoneredza, kusanganisira mashandisirwo sekutanga kugadzirwa kwetubhu kutsiva pombi yakabatana, uye kushandisa sevhecheni tambo mukupedzisa kuripo, kukandirwa mutsime riripo, kusimudza kwekugadzira, kusimudza gasi, kupedzisa kweESP uye huviri hwakanyanya tambo.
◆ Inowedzera kuchengetedza nekudzora iyo nguva yekuchera rig inogara panzvimbo.
◆ Inoderedza iyo tubular mutengo nekuderedza iyo gomba uye saizi saizi.
Completion Kupedzisa nekukurumidza kupfuura kwakajairwa rig uye jointed tubing.
Vent Kudzivirira kuumbwa kwekukuvara kwakabatana nekuuraya zvinwiwa.
◆ Inowanikwa mune ese anozivikanwa API tambo uye flange kubatana kana musanganiswa wezvose zviri zviviri.
◆ Pressure ratings inofananidzwa neyakaenzana kumanikidza kweakakora matabhu.
CHEMAOKO CHEMAHARA BOPI YERUDZI & KUFAMBIRA MBERI RUVARO Pombi
Yakagadzirirwa kutsigira zvakanaka kutsemura mashandiro muzuva ranhasi gasi kupera maitiro. Uye zvakare, iyo sisitimu inoshanda nemazvo kunyorera uko yakakwira yekugadzira mitengo inoderera nekukurumidza uye tambo yesiphon inofanira kuwedzerwa pane inotevera zuva kuti iwedzere kuwedzera kugadzirwa. Iyo diki tubing musoro flange inobvumidza kune hupfumi kwenguva pfupi isina tubingless mhedzisiro uye neyechinyakare matabhu ekupedzisa. Mhando iyi yekupedzisa inobvisa kudiwa kwemusoro wemusoro wekuzviparadzanisa maturusi uye saver yemuti panguva yebasa rekutsemura tsime, kuchengetedza nguva nemari. Iyo sisitimu inotsigira yakajairwa jointed tubing kana yakamonerwa machubhu ekupedzisa.
◆ Inowanikwa kusvika pamakumi mashanu ezviuru ematsime.
◆ Inokodzera nharaunda inovava, inoparadza uye kana uchigadzira munzvimbo dzinotarisana nharaunda kana padhuze nevanhu (AA kusvika HH).
◆ Inobvisa kudiwa kwemidziyo yeWellhead Isolate uye Saver Muti kudzikisa mutengo wekushandisa.
◆ Inoderedza kutsemuka kwemitengo yemaroja nekuda kwehukuru hudiki.
◆ Inobvumira tambo yesiphon kumhanyisa kuburikidza neXT, kumhara, uye kurongedzwa. Iyo yakakura-inobereka XT inogona kubviswa uye kutsiviwa neyakawedzera mari mutengo unoenderana nehukuru hwetubhu uye kumanikidza kwekugadzira kwetsime rinoyerera.
◆ Inowanikwawo kuti ishandiswe neiyo DTO Wellhead System ichipa imwe nguva yekuchera uye yekupedzisa kuchengetedza.
Yakagadzirirwa kubvumira tsime kupindira kuti kuitike pasina kubvisa iyo XT uye flowline. Izvi zvinobvumidza iyo Operator kuchengetedza flowline yekubatana, nekudaro, kudzikisa mutengo unobatana nekubatanidzazve tsime uye kugonesa tsime kudzoserwa parwizi nekukurumidza.
◆ Inowanikwa inosvika zviuru gumi psi matsime uye ekupedzisa hukuru kusvika uye kusanganisira 9 ".
◆ Nzvimbo dzekugadzira dzinosanganisira oiri, gasi uye kusimudza gasi.
◆ Inorerutsa mukana wekuwana tambo yetibhu yekugadzira.
Inopa kuwanikwa kuri nyore kweMugadziri Wezvigadzirwa kumavharuvhu egedhi.
◆ Pamakuru-mabheya ekupedzisa, anogona kudzora zvakanyanya kukwirira kunodiwa kune tsime remusoro wedheki.
◆ Inoshandisa Magetsi masisitimu 'epamutemo kupindira elastomer zvisimbiso uye elastomer chisimbiso macomputer uye yedu patent simbi-kune-simbi chisimbiso tekinoroji.
LARGE - BORE KUZADZISA
Yakagadzirirwa yakakwira-vhoriyamu kuyerera kwenzvimbo uye kunyorera uko kukukurwa nekuda kweiyo kuyerera kwemitengo kungave iri nyaya. Iyi pfungwa inoshandisa Energy Systems 'yazvino tekinoroji musimbi uye elastomer zvisimbiso uye Model 120/130 gedhi vharafu.
◆ Inowanikwa kusvika pamakumi mashanu ezviuru ematsime epsi uye ekupedzisa hukuru kusvika uye kusanganisira 7 1/16 ".
◆ Zvichienderana nechinhu, tembiricha yepamusoro yepamusoro inogona kunge yakakwira kunge 450oF.
◆ Inoshandisa Energy Systems 'patent simbi-kune simbi yekuisa chisimbiso tekinoroji.
◆ Certified kuAPI 6A, Appendikisi F, PR-2 pamwe nekuwedzera mazana matatu seanodiwa neECPAI
TUBING RAKABONESWA ESP
Yakagadzirirwa kubvumidza iyo inonyudza pombi kuti itorwe pamwe neashoma tsime kupindira uye ine yakazvimoneredza tubing unit. Tsime rinogadzirwa kubva pachivande; Nekudaro, iyo yekuyerera inogara yakasimba panguva chero yekutsigira kupindira. Kukanganisika kunozivikanwa kweESPNs ndeyekuchengetedza kwekugara kunodiwa pane chero pombi yekudonha. Iyi dhizaini dhizaini inobvumira iyo kugadzirisa kuitike muchidimbu chenguva neyakajairika ESP nzira dzekupedzisa.
◆ Mano ekudzosera patsva matsime aripo uye matsva ekuboora.
Inoenderera mberi flowline yekubatana neBOP kupindira.
◆ Zadzisa mushando webasa pasi pe "rarama zvakanaka" mamiriro.
◆ Isolate yemagetsi tambo uye tambo splice.
◆ Kurumidza kuita basa uye kubatanidza kubatanidza.
TLP / SPAR KUZADZISA
Yakagadzirirwa kuti ipe yakaoma muti kuwana kune subsea tsime kubva kune tension gumbo chikuva (TLP) uye SPAR.
◆ Imwe uye mbiri casing riser dhizaini dhizaini kune ese epamusoro mamakisheni ekusimudza kunyorera.
◆ Inowanikwa kusvika pamakumi mashanu ezviuru zvesi psi musoro uye hukuru hwekupedzisa kusvika pa7 1/16 ".
◆ Kuneta-kusagadzikana kureba gadziridzo hanger uye majekiseni ekusimudza echokwadi uye nekukurumidza riser yakaturikwa.
Riser mutoro kuyera kugona iyo inobvumira nyore kuiswa uye kugadzirisa.
◆ Makomputa dhizaini ayo anoderedza huremu nekukwirira kwenzvimbo dzakatsiga dzakamira nekusimudza huremu hwehuremu hwemvura yakadzika yekupedzisa zvikamu
◆ Kushandisa kwepakati nepakati kumanikidza mavharuvhu (6,650 psi) yekuchengetedza uremu.
Ports Multiple chiteshi uye inoenderera kutonga mitsara.
◆ Inoshandisa Energy Systems 'patent simbi-kune simbi chisimbiso tekinoroji.
◆ Yakabatana dhizaini yekuwana mapuratifomu inobvumidza yakachengeteka yevashandi kuwana mune yakaoma nzvimbo mamiriro.
Pashure: KUKOSHA MISORO
Zvadaro: Simbi mbiri-Piece inoyerera Bhora Valve
Krisimasi Muti Uye Wellhead
Wellhead Uye Kisimusi Muti
Wellhead Uye Kisimusi Muti Midziyo
Wellhead Uye Kisimusi Muti Kugadziriswa
Wellhead Assembly Uye Muti weKisimusi